Paris St Germain oo ku dhow inay gacanta ku dhigto xiddig bar-tilmaameed u ah kooxda Juventus – Gool FM
(Paris) 24 Juunyo 2019. Paris St Germain uu hogaaminayo tababare Thomas Tuchel ayaa u muuqata mid ku sii dhawaaneysa inay la saxiixato xiddiga reer Serbia iyo kooxda Lazio ee Sergej Milinković-Savić oo bar-tilmaameed buuxa u ah Juventus inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Wargeyska “Corriere dello Sport” ayaa maanta oo Isniin ah sheegay in Paris St Germain ay qarka u saaran tahay inay sameyso saxiixa xiddiga khadka dhexe ee reer Serbia iyo kooxda Lazio Milinković-Savić suuqan xagaaga.
Sida ay wararku sheegayaan maamulka PSG ayaa waxay la dhacsan yihiin qaab ciyaareedka 24 jirkan reer Serbia, waxayna doonayaan inay qeyb kaga soo dhigtaan khadkooda dhexe, waxaana la fahansan yahay in kooxda Lazio aysan wax dood ah ka qabi doonin inay iibiso.
Kooxda reer Talyaani ee Lazio ayaa dooneysa inay ku iibisio laacibkeedan Sergej Milinković-Savić aduun dhan 100 milyan euro xiliyada soo aadan.
Dhinaca kale kooxda Juventus ayaa waxay bar-tilmaameed koowaad ka dhiganeysaa Sergej Milinković-Savić inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga, laakiin xaaladda ayaa is bedeshay kaddib markii laga war helay in maamulka Bianconeri ay xiiseenayaan adeega Paul Pogba hadii ay dhacdo inuu ka dhaqaaqo Mancheter United, waxayna doonayaan inuu ku soo laabto magaalada Turin.